Muchidzidzo ichi, isu tichadzidza mabasa eGerman, vadzidzi vanodiwa. Ndeupi musiyano uripo pakati pehunyanzvi hweGerman nehunyanzvi hweTurkey, tinoti sei basa redu muchiGerman, zvirevo zvebasa reGerman, tinobvunza sei munhu ari pamberi pedu nezvebasa ravo, mutongo wekubvunza basa muchiGerman nenyaya dzakadai. .
Chekutanga pane zvese, ngatitii kushandiswa kwakasiyana kunoonekwa mune zvehunyanzvi hweGerman zvinoenderana nehunhu hwemunhu anoita basa iri. Saka kana mudzidzisi ari murume, rimwe izwi rinotaurwa muchiGerman, uye rimwe izwi rinotaurwa kana riri mukadzi. Uye zvakare, der artikeli inoshandiswa pamberi pevarume, uye die articel inoshandiswa pamberi pevakadzi.
Mushure mekuongorora tafura pazasi Nehunyanzvi muchiGermanIwe unenge uine ruzivo rwakadzama nezve r.
Chii chiri pane yakasara iyo peji?
Iyi nhaurwa, inonzi mapurofesa eGerman, inyaya yakazara kwazvo uye inotsigirwa nemienzaniso mizhinji. Yakave yakanyatsogadzirirwa neayo almancax timu. Zvigadzirwa zveGerman zvinowanzo dzidziswa mugiredhi re9, dzimwe nguva zvakare kune gumi giredhi vadzidzi. Pa peji ino, isu tinotanga tadzidza nezve mazita emabasa muchiGerman. Gare gare ChiGerman basa-rinobvunza mitsara tichadzidza. Gare gare ChiGerman chirevo mazwi tichadzidza. Gare gare, tichaona nyanzvi dzeGerman muhuwandu pamwe nemifananidzo. Nyatsoongorora mifananidzo inoshamisa yatakakugadzirira.
ChiGerman Mapurofesa Lecture
Zvigadzirwa zveGerman Kana tikataura nezvazvo muchidimbu uye Zvigadzirwa zveGerman ile Turkish mabasa Kana tikataura nezveimwe misiyano iripo, tinogona kupfupisa muchidimbu muzvinhu zvishoma.
MuTurkey, hapana musiyano pakati pemurume kana mukadzi kana uchiudza basa remumwe munhu. Semuenzaniso, tinodaidza mudzidzisi wechirume kuti mudzidzisi, uye mukadzi mudzidzisi kuti mudzidzisi.. Saizvozvovo, tinodaidza chiremba wechirume chiremba, uye mukadzi chiremba, chiremba. Saizvozvovo, tinodaidza gweta rechirume gweta, uye gweta rechikadzi, gweta. Iyi mienzaniso inogona kuenderera mberi zvakare. Zvisinei, izvi hazvisizvo zvakaitika neGerman., murume anoziva nezvebasa anonzi rimwe izwi, iye connoisseur anonzi rimwe izwi. Semuenzaniso, mudzidzisi wechirume muchiGerman "mudzidzisi"Inonzi. Kumudzidzisi wechikadzi, "Mudzidzisi"Inonzi. Kumudzidzi wechirume "Mudzidzi"Anonzi, mukadzi wechikadzi" anonzi "mudzidzi"Inonzi. Izvo zvinokwanisika kubereka iyi mienzaniso zvakare. Izvo iwe zvausingafanire kukanganwa ndezvekuti pane mutsauko pakati pevarume nevakadzi mumazita emabasa eGerman.
Mumazita emabasa echiGerman, kupera kwemazita echirume echirume kazhinji -in Nekuunza zvishongo, mazita echikadzi echikadzi anogadzirwa Semuenzaniso, mudzidzisi wechirume mudzidzisi apo mudzidzisi wechikadzi "Mudzidzisi"Izwi"mudzidzisi"Yezwi -in Ndiyo fomu yezvishongo. Mudzidzi wechirume "MudzidziIpo "mukadzi wechikadzi"mudzidzi"Izwi"MudzidziIcho chimiro cheizwi "iro rine zvishongo. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve izvo zvishongo uye nzira yekubatanidza zviito, pane misoro pane yedu saiti.
Chinyorwa chemazita emabasa anoshandiswa kuvarume "ari"Chinyorwa. Icho chinyorwa pamazita emabasa anoshandiswa kuvakadzi ndechekuti:ari"Chinyorwa. Semuyenzaniso: der Mudzidzi - akafa mudzidzi
Hongu vadikani, Zvigadzirwa zveGerman Isu takapa rumwe ruzivo uye rwakakosha ruzivo nezve.
Iye zvino ngatione mabasa eGerman mune akanyorwa. Ehezve, ngatikuyeuchidzei kuti isu hatigone kupa zvese hunyanzvi muchiGerman pano pane peji rimwe. Pane ino peji, isu tinongonyora chete anonyanyo shandiswa kana mazhinji akabatanidzwa echiGerman mazita emazita uye kwavo Turkish zvinoreva. Kana iwe uchida, iwe unogona kudzidza hunyanzvi husina kuverengerwa mune runyorwa pano, kubva kumadimikira echiGerman.
Yedu hurukuro yakapihwa mabasa echiGerman anonyanya kubva mukubata nemusoro, padanho rekutanga, bereka chiGerman chemabasa anonyanya kushandiswa muhupenyu hwezuva nezuva uye shandisa aya mabasa eGerman mumitsara nekuongorora kwedu gadziriso yemitongo, dzidza mabasa eGerman pamwechete, maererano nehunhu. Nekuti, sekutaura kwedu, muchiGerman, varume nevakadzi vemabasa mazhinji vanodomwa zvakasiyana, semuenzaniso, mudzidzisi wechirume uye mukadzi mudzidzisi vakasiyana.
Rondedzero pazasi ndiwo anonyanya kushandiswa mazita echiGerman ekushanda evarume nevakadzi.
Ehezve, hazvigoneke kunyora ese emabasa zvizere. Isu takanyora anonyanya kushandiswa uye akasangana nehunyanzvi muhupenyu hwezuva nezuva.
Tumira mabasa eGerman iwe aunoda kuwedzera, uye ngatiwedzere iwo patafura pazasi.
der Soldat die Soldatin musoja
der Koch die Köchin kuka
der Rechtsanwalt die Rechtsanwältin gweta
der Friseur kufa Friseure Barber, murume ane bvudzi
der Bauer die Bäuerin murimi
der Apotheker die Apothekerin mutengesi wemishonga
der Hausmann die Hausfrau Mukadzi wemba, mukadzi wemba
der Kellner kufa Kellnerin hweta
der Mutori wenhau kufa Mutori wenhau mutapi wenhau
der Richter kufa Richterin Hakim
der Geschäftsmann die Geschäftsfrau Bhizinesi Vanhu
der Feuerwehrmann die Feuerwehrfrau fayameni
der Metzger die Metzgerin uraya
der Beamter die Beamtin mutungamiriri
der Friseur kufa Friseurin mugeri
der Architekt die Architektin akitekiti
der Ingenieur kufa ingenieurin injiniya
der Musiker die Musikerin muimbi
der Schauspieler die Schauspielerin mutambi
der Mudzidzi akafa mudzidzi Mudzidzi (yunivhesiti)
der Schüler die Schülerin Mudzidzi (chikoro chesekondari)
der Lehrer die lehrerin mudzidzisi
der chef kufa chefin Patron
der Pilot kufa Pilotin Pilot
vezvematongerwo enyika kufa Politikerin enyika
der Maler die Malerin mupendi
der Saatsanwalt kufa Saatsanwaltin voruzhinji gweta
der Fahrer kufa Fahrerin mutyairi
der Dolmetscher kufa Dolmetscherin muturikiri
der Schneider die Schneiderin zvokusona
der Kauffmann die Kauffrau Mutengesi, mutengesi
der Schriftsteller die Schriftstellerin munyori
Izvo zvinyorwa zvinonyora mazita anozivikanwa zvikuru echiGermany mazita evarume nevakadzi.
Kune akawanda mabasa muGerman, pane musiyano wechirume / wechikadzi, sezvingaonekwa pazasi. Semuenzaniso, kana mudzidzisi ari murume, izwi rekuti "Lehrer" rinoshandiswa,
Izwi rekuti "Lehrerin" rinoshandiswa kumudzidzisi wechikadzi. Izwi rekuti "Schüler" rinoshandiswa kumudzidzi wechirume uye "Schülerin" kumudzidzi wechikadzi. Sezvinoonekwa, nekuwedzera iyo -in kumagumo emazita emabasa anoshandiswa kuvarume, zita rebasa rinofanira kushandiswa kumadzimai rinowanikwa. Izvi zvinowanzoitika.
Panguva ino, ngatitaurei zvinotevera seboka realmancax; Izvo hazvigoneke kupa zvese zvehunyanzvi pane ino peji, emuenzaniso mazwi atakapa anosarudzwa zvichibva pane anonyanya kushandiswa uye akasangana kwazvo mazwi muhupenyu hwezuva nezuva. Kuti udzidze chiGerman chemabasa asiri kuwanikwa pano, unofanirwa kutarisa duramazwi. Iwe unodawo kudzidza kuwanda kwemazwi aya kubva muduramazwi.
MuGerman, chinyorwa chemazita ese emabasa "der" Izvi zvinoshanda kumazita emabasa anoshandiswa kuvarume.
Chinyorwa chemazita emabasa anoshandiswa kune vakadzi "kufa". Kazhinji, zvinyorwa hazvishandiswe mumutsara pamberi pemazita emabasa.
Mitsara inobatana neZvishanduri zveGermany
1. ChiGerman Kubvunza Zvikamu
Mitsara yekukumbira basa muchiGerman ndeiyi inotevera. Kana isu tichishuva apo patinogona kubvunza mumwe munhu nezve rake / basa rake Aive bist du von Beruf Tinogona kubvunza basa rako nekutaura kana kana tichida Was is dein Beruf Tinogona kubvunza mumwe munhu muchiGerman nezve basa ravo nekutaura. Mitemo iyi "basa rako nderei","nderipi basa rako","UnoiteyiZvinoreva sekuti ”.
2. ChiGerman Profession Zvikamu
Tarisa uone mienzaniso mitsara pazasi. Iye zvino isu tichazopa mienzaniso yemitauro yechiGerman. Kutanga, ngatipei muenzaniso mitsara ine mashoma ekuona. Ipapo, ngatiteedzerei edu emuenzaniso mitsara mune chinyorwa. Nyatsoongorora. Isu tinoshandisa Chinyorwa + Chebatsiro Verb + Noun pateni, iyo yatataura pazasi, zvese pano uye mune yedu yemberi misoro. Tinogona kupa maviri akasiyana mienzaniso sechirevo chehunyanzvi muchiGerman. (Cherekedza: kune zvakawanda zvakasiyana uye mimwe mienzaniso zvirevo pazasi pepeji)
Wokutanga muenzaniso mutongo
Wechipiri muenzaniso mutongo
Basa rangu chiremba (ini ndiri chiremba)
Mitsara yakadai se "Ini ndiri Ahmet, ini ndiri mudzidzisi" inogara ichigadzirwa nemhando imwechete. Isu tataura kuti chinyorwa chemazita echirume echirume chinonzi der, uye chinyorwa chemazita echikadzi emabasa chinofa. Zvisinei, mumitsara yakadai sekuti "Ndiri mudzidzisi, ini ndiri chiremba, ndiri mushandi", chinyorwa hachiwanzo kuiswa pamberi pemazita emabasa. Zvakare, sezvo tichireva vanopfuura munhu mumwe (muzvizhinji) patinoti "isu", "iwe" uye "ivo" mumitsara yakadai sekuti "isu tiri vadzidzisi, muri vadzidzi, ivo varapi", mune mitsara iyi chimiro chezhinji yezita rehunyanzvi rinoshandiswa. Zvino ngatipfuurire mberi kune yedu mienzaniso nezvakakura zvinoonekwa zvatakakugadzirira iwe seboka reAlmancax.
ChiGerman basa mutsara
Aive bist du von Beruf?
Ich bin Pilot: Ndini piyona
Ich bin Lehrerin: Ini ndiri mudzidzisi
Du bist Lehrer: Iwe uri mudzidzisi
Ich bin Metzgerin: Ndini mucheki
Ich bin Friseur: Ndine bhanhire
Illustrated German Crafts
Shamwari dzinodikanwa, isu tave kuratidza humwe hunyanzvi hweGerman nemifananidzo.
Iko kushandiswa kwezvinoonekwa muzvidzidzo zvinopa kunzwisiswa kuri nani kwevadzidzi kwenyaya uye kuchidzidzo kuti chirangarirwe zvirinani nemusoro. Neichi chikonzero, ndapota tarisa yedu yeGerman maprofessional mufananidzo pazasi. Izvo zvinokwana pedyo nemazwi ari mumufananidzo pazasi zvinoratidza huwandu hwezwi.
ChiGerman Vocational Sumo Mitsara
Basa rako nderei?
Ich bin Mudzidzi.
Ini ndiri mudzidzi.
Ndiri mudzidzisi. (murume mudzidzisi)
Ndiri mudzidzisi. (mukadzi mudzidzisi)
Ndiri hweta. (hweta)
Ndiri mubiki. (mr cook)
Iye zvino ngatipei mienzaniso tichishandisa mapato echitatu.
Beytullah ndiye Schüler.
Kadriye ari Lehrerin.
Meryem ist Mutyairi wendege.
Meryem mutyairi wendege.
Mustafa ndiye Schneider.
Baba vangu mutyairi.
Amai vangu mutyairi.
Shamwari dzinodiwa, Zvigadzirwa zveGerman Takasvika kumagumo kwenyaya yedu yainzi. Zvigadzirwa zveGerman Nezve mazita echiGerman emabasa, kubvunza mumwe munhu nezve iro basa uye kunongedzwa kwatiri "basa rako ndereiTakadzidza kupindura mubvunzo. Isu takadzidzawo kutaura kuti ndeapi mapato echitatu mapato.
Zvigadzirwa zveGerman Unogona kunyora nzvimbo dzausinganzwisise pamusoro penyaya iri mundima yemubvunzo pazasi.
Uye zvakare, kana paine chero nzvimbo mupfungwa dzako, unogona kubvunza mibvunzo yako kubva kubvunzo munda, uye iwe unogona zvakare kunyora ako ese maonero, mazano uye kushoropodza nezve mabasa eGerman.
Yedu saiti uye Zvidzidzo zvedu zveGerman Usakanganwa kuikurudzira kushamwari dzako uye ugovane zvidzidzo zvedu pa facebook, whatsap, twitter.
Tinokutendai nekufarira kwenyu webhusaiti yedu uye zvidzidzo zvedu zveGerman uye tinokushuvirai kubudirira muzvidzidzo zvenyu zveGerman.
Iwe unogona kukumbira chero chinhu pamusoro pemabasa echiGermany sechikamu chemaforamu edu echiGermany uye kuwana rubatsiro kubva kuvadzidzisi vedu kana mamwe masangano emusangano.
Tinokuda iwe kubudirira kukuru.
German jobsGerman occupationGerman nameGerman names occupational namesGermanGermanGerman craftsprofessions germanprofessions germanprofessions German
chimiro chekuGerman zvakanaka kwazvo thanks
guru anodaro 6 apfuura
Izvo zvidzidzo zvakanaka, asi zvingave zvirinani dai iwe wakanyora kududzwa kwemazwi nemitsara kune vanotanga kuenda kuGerman.
zita renyu anodaro 4 apfuura
asiri mutungamiri mukuru wekuparidzira mutauro wechiGermany
verengai zvinonzwika kana sesli